Uninzi unomdla kumbuzo weenzuzo zemifuno efriziwe. Ngaba ziyakudliwa kwaye zishiywe izondlo eziyimfuneko? Khawucinge xa ​​imifuno efriziwe iyanceda.
Ngeqhwa elifanelekileyo, imifuno igcina zonke izondlo zabo, ezifana nezo zifumaneka kwimifuno entsha. Oku kusebenza kwezo zinto eziqingqiweyo "ezitsha", ngqo kwigadi. Izinto ezincinci eziluncedo zigcinwa kwiimveliso ezithunyelwa kwamanye amazwe, zicwangciselwe ukulondolozwa kangcono ngexesha lokuthutha, kwaye zityalwa.
Ukuba indlela yokuqandisa imifuno ikhawuleza, ke inika isiqinisekiso esipheleleyo sokusetyenziswa kwezi mifuno zempilo, nokuba zichithwe ixesha elide. Indlela ephambili yokubanda isisombululo sokukhawuleza ngokukhawuleza. Xa imifuno ikhutshwe ngokukhawuleza, ukushisa kwemveliso kunciphisa ukusuka kumgangatho ukuya kutsho. Oku kuguqula ijusi yemifuno ibe yincinci encinane yeqhwa. Xa ukhulula imifuno, kwaye ngoku yilelo xesha, kufuneka ukwazi ukuba ubushushu kwifriji kufuneka kugcinwe rhoqo. Ukuba iqondo lokushisa lihlala liqhubeka, iikristali zeqhwa zenziwe ngokufanayo kwiiseli zemifuno kunye nesakhiwo sefiber asichithwa. Ukukhawuleza imifuno ikhutshwe, umonakalo omncinci weefayili uya kufumana.
Kwakhona kufuneka ukuba ukwazi ukuba imifuno echwayibhileyo ukuze ulondoloze zonke iivithamini kunye neemaminerali, esiyidingayo kakhulu ebusika nasentwasahlobo, kuyimfuneko ukuyipakisha ngokufanelekileyo kwifriji. Ngokunjalo, kubalulekile ukupakisha imifuno kwiipakethi okanye kwizikhuni ezikhethekileyo ukwenzela ukuba inani elincinci lomoya lihlale kuwo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba imifuno kufuneka ifakwe iqhwa kuphela kuphela - ngexesha lokubamba ixabiso, ilahlekelwa yimpawu ezintle. Kwakhona, xa ixesha lifika kwaye ufuna ukupheka imifuno efrijiweyo, awukwazi ukuwagxotha kwangaphambili, uwasuse ngamanzi uze uwafake kwi-oven microwave. Kule nto, ukusetyenziswa kwemifuno kulahlekile. Xa upheka, isidlo, imifuno echwayitiweyo kufuneka ithathwe ngokukhawuleza kwifriji, ibekwe epanini, umpheki wokhuseleko, njl.
Ukuba uthengela imifuno egciniweyo kwiipakethi kwisitoreji, kufuneka uhlawule ingqalelo ukuba iphakheji ayilungiswa (ayaziwa ukuba kaninzi kangakanani iphakheji kunye nemifuno ehlanjululwe). Kufuneka ujonge kwakhona ukubonakala kwemifuno. Ukuze kukhuliswe iindleko zemifuno, kufuneka zinyanzeliswe kwipakethe. Ukuba uthengela imifuno echwayitiweyo, ngohlobo lwe-briquette okanye i-coma, ke le mveliso ikhutshwe ngokuphindaphindiweyo. Ziyingozi kule mijelo awuyi kufumana, kodwa inzuzo iya kuba yinto encinci.
Ngoku lixesha xa iifuno zinokuqhwala. Ukuba yonke imithetho ye-teknoloji yokuqhwala iyabonwa, ukusuka kwimifuno uza kufumana isethi epheleleyo yamavithamini, i-microelements kunye nezinye izinto ezincedo.
Ulwazi olunolwazi oluninzi malunga namaqanda enkukhu
Indima yemveliso ekukhuseleni isikhumba sethu elangeni
Iipropati eziwusizo zamanqatha
Isondlo esifanelekileyo xa ususa i-gallbladder
Cannelloni kunye nenkukhu
Ukujongana nokunakekelwa ebusika
Ukulungiswa kobunzima bokulungisa
Intsimbi yeenwele iqondisa
Indlela yovuyisana nomhlobo omhle
I-stew ne-ngulube kunye neengqayi
Currant red red currant
Ukulahla kwamanani amaninzi ngeentlanzi
Ukuphakanyiswa kweeseli ezimhlophe zegazi kumchamo ngexesha lokukhulelwa
UKsenia Sobchak uya kuba namawele? ULyudmila Narusova wayenomdla kwiInternet